Posted by Tranquillus | Mar 24, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
In wax lagu qoro shaqada ma sahlana sida aad u maleyn karto. Xaqiiqdii, maahan sida wax loo qoro saaxiib dhow ama warbaahinta bulshada. Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaad isku daydo inaad hagaajiso qoraalkaaga xirfadeed maalin kasta. Xaqiiqdii, adduunka xirfadleyda ah wuxuu dalbanayaa in qorista shaqadu ay noqoto mid wax ku ool ah. Sababtoo ah sumcadda shirkadda aad ka shaqeysid ayaa ku xiran. Ka raadi maqaalkan sida loo hagaajiyo weedhaha qorista shaqada.
Ha iloobin tirooyinka hadalka
Si loo hagaajiyo jumladaha qorista shaqada, ku bilow inaad dhinac iska dhigto tirooyinka hadalka maxaa yeelay kuma jirtid qaab qoraalka suugaaneed. Sidaa darteed, uma baahnid sarbeeb, sarbeeb, sarbeeb, iwm.
Markaad qaadatid halista ah inaad u adeegsato shaxanka hadalka qoraalkaaga shaqada, waxaad halis ugu jirtaa inaad u muuqato mid iska indhatiraya indhaha akhristahaaga. Runtii, midkani wuxuu tixgelin doonaa inaad ku sugnayd xilligii jargonku ogaa sida loogu soo rogo ixtiraamka iyo cabsida dadka wada hadlaya.
Ku rid macluumaadka muhiimka ah bilowga xukunka
Si loo hagaajiyo jumladaha ku jira qorista shaqadaada, tixgeli inaad geliso macluumaadka bilowga xukunka. Waxay noqon doontaa hab lagu beddelo qaabkaaga oo aad ka soocdo mawduuca caadiga ah + falka + dhammaystirka.
Si tan loo sameeyo, dhawr ikhtiyaar ayaa kuu furan:
U isticmaal shaygii hore wixii ahaa adjective : tusaale ahaan, adoo xiiseynaya dalabkaaga, mar labaad ayaan isla xiriiri doonnaa usbuuca soo socda.
Kaabista la dhigay bilowga : Febraayo 16, waxaan kuu soo dirnay emayl ...
READ Email template si aad u muujiso diidmada
Xukunka infinfin : Si aad ula socoto wareysigeena, waxaan ku dhawaaqeynaa ansaxinta dalabkaaga ...
Adeegsiga foomka aan shakhsiyan ahayn
Hagaajinta qoraalkaaga shaqada sidoo kale waxay ka dhigan tahay inaad ka fikirto adeegsiga qaacido aan shaqsi ahayn. Waxay markaa noqon doontaa su'aal ah in laga bilaabo "isagu" oo aan cidna magacaabin. Tusaale ahaan, waxaa la isku raacay inaan usbuuc gudihiis dib uheli doono alaab-qeybiyaha, waa lagama maarmaan in dib loogu noqdo nidaamka, iwm.
Beddel ficillada kuleylka
Sidoo kale kobci qoraalkaaga xirfadeed adoo mamnuucaya aayadaha sayidka sida "inaad yeelato", "ahaato", "inaad sameyso" iyo "inaad tidhaahdo". Xaqiiq ahaan, kuwani waa ficillo aan kobcinayn qoraalkaaga oo kugu qasbaya inaad adeegsato ereyo kale si jumladu u noqoto mid sax ah.
Marka ficillada kuleylka ku badal ficillo leh macne sax ah. Waxaad ka heli doontaa ereyo isku mid ah oo kuu oggolaanaya inaad wax ku qortid si sax ah.
Erayada saxda ah halkii ay ka noqon lahaayeen shucuurta
Periphrasis waxaa loola jeedaa adeegsiga qeexitaan ama muujin dheer halkii eray uu soo koobi lahaa oo dhan. Tusaale ahaan, qaar waxay adeegsadaan ereyga "isagu wax akhriya" halka uu ka isticmaali lahaa "akhristaha", "waxaa lagaa keenay dareenkaaga instead" halkii uu ka noqon lahaa "waa laguu wargaliyay…".
Markay weedhuhu aad u dheereeyaan, qofka wax qaata si dhakhso leh ayuu u lumayaa. Dhinaca kale, adeegsiga ereyo kooban oo sax ah ayaa si weyn u fududeynaya akhriska.
Sidee loo hagaajiyaa heerka qoraalkaaga shaqada? 25-Maarso, 2021Tranquillus
horeWaxqabadka qayb ahaan: 100% caymis waaxaha ay saameeyeen xayiraadaha caafimaad
socdaXaq miyaan u leeyahay isticmaalka juquraafi ahaan si aan u xakameeyo waqtiga shaqada ee shaqaalaha?